गोकुल बाँस्कोटाको अब्स्ट्रयाक्ट पोट्रेट « Pahilo News
प्रकाशित मिति : 28 May, 2019 10:31 am
काठमाडौं । तपाइँ हास्य कलाकारको प्रस्तुति अगाडि कस्तो मूडमा हुनुहुन्छ ? सहज जवाफ हुनेछ– हाँस्ने । तर, हास्य कलाकारले जस्तै भाषामा अरूले विषयवस्तु उठाए भने पनि त्यसैगरी हाँस्ने मूडमा हुनुहुन्छ ? जवाफका लागि केहीबेर अल्मलिनु होला र भन्नुहोला– नहाँस्न पनि सक्छु ।
किनभने, हास्य कलाकारप्रति मानिसको मनोविज्ञान नै अर्कै हुन्छ । त्यसैले हास्य कलाकारले सामान्य भाषा बोलेपनि दर्शक हाँस्न थालिहाल्छ । हो, तपाइ कस्तोे मनोविज्ञान लिएर कसैका सामू प्रस्तुत हुनु हुन्छ । अवस्य, त्यहीअनुसारको मनोविज्ञान तयार हुन्छ । दृष्टिकोण बन्छ । प्रतिक्रिया दिनु हुन्छ ।
अहिले, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ । मन्त्री बाँस्कोटासँग थुप्रै कमजोरी होलान् । कमजोरीका कुरा अगाडि मनोविज्ञानका चर्चा गरौं । के हरेक मानिस सम्पूर्ण रूपमा कमजोरीले मात्रै भरिएका हुन्छन् त ? अवस्य हुँदैनन् । दिशा र दृष्टिकोणले सवल अनि कमसल पक्षको बृतान्त बताउछ ।
राष्ट्रिय राजनीतिको पर्दामा गोकुल बाँस्कोटाको कायाँ यसअघि त्यति विघ्न ठूलो थिएनन् । तर, शून्यबाट एकै पटक सयमा पुगेका व्यक्ति हुन् भन्नु अन्याय नै हुनेछ । किनभने, लामो समय तत्कालीन एमालेका लागि योगदान दिएका व्यक्ति हुन्– गोकुल बाँस्कोटा ।
पाँच वर्षे स्थिर सरकारको प्रवक्ता बनेपछि भने राष्ट्रिय राजनीतिको पर्दामा अघिल्लो पंक्तिमा देखिए । यसपछि शुरूतिरका पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटा थोरै आक्रमक तरिकाले प्रस्तुत भए । यसपछि त मन्त्री बाँस्कोटालाई भिलेनजसरी देखाउन थालियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सूचना लिने होइन, मन्त्री बाँस्कोटाले आज के कमजोरी गर्लान् ? भन्नेगरी पत्रकारहरू कलम तयार पार्न थाले ।
जस्तो कि अहिले मन्त्री बाँस्कोटाले प्रस्ट भाषामा मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन हुन्छ भनिरहेका छन् । अझ थप पनि भनिरहेका छन् कि मिडिया काउन्सिल पत्रकारहरूकै माग हो, त्यसैले फिर्ता हुँदैन ।
तर, समाचारको शीर्षक नै हुन्छ– ‘विधेयक फिर्ता हुँदैन’ मात्रै । संशोधन गरिन्छ भन्ने कुरा चाँही पूरै गौण छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, मन्त्री बाँस्कोटाप्रति विषेशगरी पत्रकारहरुले हेर्ने दृष्टिकोण नै नेगेटिभ बनिसक्यो ।
जबकी, मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकसहित ल्याएका विधेयकहरुले नेपालको पत्रकारिताले काँचुली फेर्ने देखिन्छ । क्लिन फिडले अर्वौ रूपैयाँ भारत जान रोकिने मात्रै होइन, नेपाली कलाकारहरूको जीवनमा पनि प्याराडाइम शिफ्ट नै हुने देखिएको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाले नै नेपालको आफ्नै स्याटलाइट राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । सामाजिक सञ्जालले नेपालमा दर्ता भएर कर तिर्ने कुरादेखि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्मका निर्णय गरेका छन् ।
तर, न्यूनतम तलब नदिने सञ्चार माध्यमलाई मन्त्री बाँस्कोटाले जसरी अप्ठ्यारो पारेका थिए । नेपाल पत्रकार महासँघकै कारण त्यो बिफल बन्दै गएको छ । अर्कोतिर, जसरी पत्रकार महासँघले अन्तरराष्ट्रिय मिसन बोलाउने निर्णय गरेको छ । त्यसको दीर्घकालीन निर्णय र नियतमाथि नै पत्रकार महासंँघका अधिकांश सदस्यले राखिरहेका छन् । यसको विरोधमा मन्त्री बाँस्कोटा सम्झौतारहित ढंगले प्रस्तुत छन्, जुन नेपाली राष्ट्रियता र समृद्धिका लागि आवश्यक छन् ।